နိုင်ငံရေးမှာ ဘာသာသာသနာကိုရောယှက်ပြီး ခုတုံးမလုပ်ဖို့ သက်သေနဲ့တကွ အသေအချာပြောလာတဲ့ မိတ်ကပ်မေဦး - Myanmarload
နိုင်ငံရေးမှာ ဘာသာသာသနာကိုရောယှက်ပြီး ခုတုံးမလုပ်ဖို့ သက်သေနဲ့တကွ အသေအချာပြောလာတဲ့ မိတ်ကပ်မေဦး
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နေ့ က 12:32 June 10, 2021
နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဆိုတာ သီခြားစီတည်ရှိနေတဲ့အရာနှစ်ခုပါ။ ဒီနှစ်ခုဟာရောထွေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ရောထွေးလိုက်ရင်လည်း မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရေးသာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးဟာတော့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အထတွေဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေမှာ မဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပြည်သူအချင်းချင်း ဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်ကြသူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီလိုမလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖန်တီးနေသူတွေရှိကြောင်း မိတ်ကပ်မေဦးက သက်သေနဲ့တကွ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာသာသနာဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိကြပြီး အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာအဓွန့်ရှည်တည်တံ့အောင်လည်းဆောင်ရွက်ကြသလို ကောင်းမွန်တဲ့ အဆုံးအမတွေကိုလည်း လိုက်နာပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အထကောင်းတွေဟာ ဘာနဲ့မှမရောယှက်သင့်ဘဲ သီးခြားတည်ရှိနေသင့်တာပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ရောယှက်ချင်သူတွေရဲ့ အနှောင့်အသွားမလွတ်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ နိုင်ငံ့အရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားပေးနေသူတွေ အတွက်တော့ အကြီးမားဆုံး ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေပါပဲ။
မတူညီတဲ့နှစ်ခုကို မရောထွေးဖို့ " ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကာကွယ်ရမဲ့ဘာသာလား? ကိုးကွယ်ရမဲ့ဘာသာလား? လိုက်နာကျင့်ကြံရမဲ့ဘာသာလား? သုတ္တန် ဒေဿနာတော်တွေမှာ ဘုရားက ဘယ်လိုမှာခဲ့လဲ သိချင်မိတယ် ဘုရားက ကာကွယ်ကြပါဆိုရင် ကာကွယ်ကြတာပေါ့ လွယ်ပါတယ် ဘုရားကငါ့ကိုကိုးကွယ်ကြပါ ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့ (၅) ကြိမ် ထိုင်ရှိခိုးကြတာပေါ့လွယ်ပါတယ် ကျင့်ကြံလိုက်နာကြပါဆိုရင်တော့ (နည်းနည်းခက်တယ်မဟုတ်လား? ) နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေး ဘာသာရေးကဘာသာရေး မရောယှတ်ပါနဲ့ ခုတုံးမလုပ်ကြပါနဲ့ " ဆိုပြီး မိတ်ကပ်မေဦးက အသိပေးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို ကွဲကွဲပြားပြား သိမြင်ပြီး ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: May Oo's FB Acc